Dumbbell Pairs Fitness Mbụ Urethane nwere Dumbbell Pairs
Ihe: NLA NA RUBBER
nọmba usoro n'usoro : YL003
10-akụkụ dumbbells nwere isi siri ike
Kechie na urethane iji belata mkpọtụ
Aka chrome nwere ederede maka njide echekwara
Eji igwe anaghị agba nchara dị mma azụmaahịa nwere mkpuchi urethane adịchaghị
Ebe obibi ma ọ bụ mgbatị ahụ. ma ọ bụ na-agba ume ịbelata ibu arọ
Nke a dumbbell-barbell setịpụrụ kpam kpam 33lb, gụnyere anọ 4.4 lb. efere, anọ 3.3 lb, otu njikọ mkpanaka, otu ergonomic mmanya, adabara maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ mgbatị ahụ dị ka ịchọrọ.
Ihe niile n'ime otu dumbbell-barbell na-enye gị ohere ịme mgbatị ahụ dịgasị iche iche.Enwere ike iji dumbbells kpụrụ ogwe aka gị, ebe nhazi barbell na-enye gị ohere ịme ihe ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ squats, nke dị arọ 33lb iji gboo mkpa gị.
Mkpanaka njide pụrụiche nwere njide ka mma yana udidi njikwa ihe n'ụdị atụgharị nwere n'elu.Mkpanaka njikọ ahụ nwere sponge gbara ọkpụrụkpụ nke nwere ike igbochi ịpụpụ, dị mma ma dị mma karị.Site na paịlị n'akụkụ, dumbbell set adịghị mfe ịtụgharị, nke bụ enyi na enyi karịa dumbbells nkịtị.
Zuru oke maka iji mmega ahụ ọ bụla ogwe aka, ubu, na azụ gị, na-enyere aka ụda na ịkpụ aka gị, ubu, azụ, obi na ụkwụ gị, na-eme ka mmega ahụ dịkwuo mma ma dị mma, dị mfe iji wuo ahụ gị, ma nọgide na-ahụ ike.
Nke gara aga: Ọzụzụ Mwelite arọ Kettlebell anaghị amị amị amị ike Iron Kettlebell
Osote: Gbanwee Dumbbell arọ site na ịtụgharị aka, Dumbbell ojii nwere ike imegharị ya na tray maka nwoke na nwanyị ụlọ mgbatị ahụ, yana njikwa ọla mgbochi-slip
Gbanwee Dumbbell arọ site na ịtụgharị Handle, Black...
Dumbbells rọba ekpuchiri nkedo Iron Hex Black Dum...